Tirada shaqo la'aanta ku sugan waqti dheer oo kor u kacday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tirada shaqo la'aanta ku sugan waqti dheer oo kor u kacday
La daabacay fredag 11 november 2016 kl 09.59
Arbetsförmedlingen: Suuqa shaqada Sweden waa wanaagsan yahay
Kor u kaca tirada shaqo la'aanta ku sugan waxaa u sabab ah dadka dalka ku cusub ee sharciga la siiyey. sawir: Jessica Gow/TT, Drago Prvulovic/TT
Dhamaadkii bishii oktober 361 00 oo qof ayaa shaqo la’aan uga diiwaan gashanaa xaafiiska Arbetsförmedlingen, taas oo ah hoos u dhac dhan 11 000 marka loo barbarbdhigo sannadkii hore.
Dhanka kale dadka waqtiga dheer shaqo la’aanta ku sugnaa ayey tiradooda ku darsantay 2 000 oo qof. Dadkan ayaa tobankii afar shaqo la’aan ku sugnaayeen waqti ka badan hal sanno.
– kor u kaca tirada waqtiga dheer shaqo la’aanta ku sugan waxaa u sabab ah dadka dalka ku cusub ee iska diiwaan-geliyey xaafiiska shaqada kadib markii sharciga deganaanshaha la siiyey, ayey tiri Annika Sunden oo madax ka ah waax ka tirsan xafiiska shaqada.
Waxaa la weydiiyey Xaafiiska shaqada sidee u maareyn karaa mar haddii dad badan oo waddanka ku cusub iska diiwaan-gelinayaan xaafiiska shaqada?
– Dabcan dad badan ayaa xaafiiska shaqada laga diiwaan-gelinayaa taas oo culus keeda leh, laakiin dhan kale markii laga fiiriyo waxay fursad weyn u tahay suuqada shaqada Sweden, waayo dadkan waxaa ka buuxa qaar badan oo leh awoodda xirfadeed ee loo baahan yahay. Waxaa muhim ah in Arbetsförmedlingen, degmooyinka dalka iyo goobaha waxbrashada ay ka wado shaqeeyaan sidii dadkan suuqa shaqada lugta ula geli lahaayeen.
Shaqo dadkan ma loo hayaa?
– Suuq shaqada Sweden waa mid aad hadda u wanaagsan, balse waxay sharuudda tahay qofka in uu leeyahay aqoonta looga baahan yahay suuqa shaqada, ugu yaraan heysto shahaadada dugsi sare, laakiin dadyowga dalka ku cusub qiyaastii kala bar ayaan soo dhigan dugsiga sare. Taas oo qasab ka muhiim ka dhigeysa in lagu dadaalo kor u qaadidda awoodda xirfadeed ee dadkan si ay shaqo u helaan dhaqaalaha dalkana wax ugu soo kordhiyaan, ayey tiri Annika Sundén oo madax ka ah waax xaafiiska shaqada u qaabilsan faaleynta.
fredag 11 november 2016 kl 08.00